Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee loo dhiso dib u qaabeyn, ama laga yaabo in ay u iibsadaan halkii?
Dabcan, habka ugu fiican ee loo dhisi karo dib u dhis waa in ay si dabiici ah iyo mid ahaanba u helaan. Isla mar ahaantaana, waxaad wali ku jiri kartaa sidoo kale iskuday inaad iibsato iyaga oo leh qaar ka mid ah tayada tayo sare leh iyo bogag internetka. Laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ogaato waxa qiimaha dhabta ah ee iibsashada dhabarka. Hagaag, looma baahna in la yiraahdo xiriir kasta oo tayo sare leh PR, PA, iyo DA marnaba ma imanayaan qiimo jaban - enviar archivo adjunto en email php. Haddaba, intee ayay suurtogal u tahay inay ku kacaan, ugu yaraan qiyaastii?
Nasiib darro, ma jiraan siyaasad qiimo jaban - wax walba waxay kuxiran yihiin bixiyahooda. Tusaale ahaan, haddaad blog ka shaqeysid, habka ugu wanaagsan ee lagu dhisayo backlinks waa inaad u gudbisaa woxogaa hay'adaha qaarkood si markaas lagugu soo dalaco lacag. Iyadoo la tixgelinayo dhammaan shabakadaha internetka ee bixiya dhismo tayo leh oo tayo leh, adeegyadooda ayaa sida caadiga ah laga soo xigtay qiyaastii $ 25 gadaalba $ 100 ama ka sareeya. Laakiin halkan waxaan ku soo galeynaa meel aad u jilicsan - qofna hadda si furan uma sheegi doono inuu iibinayo backlinks. Waa maxay sababta? Sababtoo ah waxay noqon kartaa habka ugu sahlan ee Google in ay wax uga qabato dhammaantood - iibiyeyaasha aan walwalka laheyn, iyo sidoo kale macaamiishooda nasiib darrada ah. Waxaan ula jeedaa in la tixgeliyo siyaasadda raadinta hadda, waxaad si sahlan u "ku raaxeysan kartaa" liis darajo hoose, iyo sidoo kale hay'ad hoosaad ah. Mararka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, milkiilayaasha bogagga waxay ku dhaafi karaan xiriirada tayada xun si ay wax walbaa ugu dhamaato dhammaystir dhamaystiran natiijooyinka raadinta. Taasi waa sababta aad u raadineysid habka ugu wanaagsan ee lagu dhisayo backlinks, laga yaabee inaad hore u soo dhaweysay dhibaatooyinka.
Sida ugu fiican, habka ugu wanaagsan ee lagu dhisayo backlinks ayaa sameeya iyada oo aanad gelin boggaga internetka ee halis weyn u leh inay ku galaan rikoor celinta Google. Mana bixinayno wax badan, sax ah? Haddii aad fahamsan tahay hanjabaadaha oo aad weli rabto inaad u guurto, halkan waxaa ah talooyin macquul ah oo kaa caawin kara sidaan:
Waxaad ka faa'iideysan kartaa boostada martida ee lacagta lagu bixiyo, maadaama ay jiraan adeegyo badan oo iibsashada ah oo badan Webka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad heshay wakhti kugu filan - maxaad u bixineysaa ka dib? Haddii aad xirfad u leedahay qoraal qoraallo tayo leh, waxaad soo saari kartaa qaar ka mid ah saamileyda ugu muhiimsan ee warshadahaaga iyo isku xirkooda iyaga oo aan lacag bixin. Adiga ayaa kaliya oo aad go'aan ka gaari karto haddii aad lacag bixiso si aad marti u noqoto, ama aad keligaa sameyso.
Shabakadda isku xirka SAPE waxay noqon kartaa xal aad ufiican oo dib loogu soo celiyo boggaaga internetka lacag bixinta bil kasta, marka laga reebo marar badan ka soo jimcsanaanta. Laakiin halkan waa taxaddar - iyadoo la tixgelinayo in shabakado badan oo ka tirsan shabakadani la jabsaday ama loo isticmaalo sharcidarro (i. e. , xitaa adigoon u sheegin milkiilayaasha dhabta ah), hubi inaad la tacaaleyso kuwa saxda ah. Had iyo jeer hayso baaris labadii musharax ee suurtagal ah si aad u iibsato xiriirada.
Wax ka qabashada qaar ka mid ah bloggers oo caan ah oo lagu kalsoon yahay ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu dhisayo dhabarka, ugu yaraan ama ka yar mid amaan ah. Waxyaabahani waa inaad si sahlan u heli kartid bloggers badan oo mashaariicdooda ku sameeya nuucaaga. Looma baahna in la yiraahdo ma aha inay xishoodaan in ay si furan u buuxiyaan adeegyadooda, inta badan waxay ka bilaabmaan qiyaastii boqol doolar. Xaqiiqdii, tani waa wax ku saabsan ganacsiga, sax?